Ogaden News Agency (ONA) – Jaaliyadaha Qaarada Europe ee Ogadeniya oo soo gaadhay wadanka Denmark kana qeybgalaya Shir barito
Jaaliyadaha Qaarada Europe ee Ogadeniya oo soo gaadhay wadanka Denmark kana qeybgalaya Shir barito
Wadanka Denmark ayaa waxa kusoo qulqulaya shacab aad u tiro badan oo raba inay ka qeyb galaan shir siminaar ah oo ay Jaaliyada Somalida Ogadeniya ku qabanayso caasimada Coppenhegan barito. Shirkan oo dhacaya 2 April 2012 oo berri ku beegan ayaa waxa kasoo qeyb gali doona Jaaliyado ajanabi ah oo ka imanaya Wadanka Ireland, Finland iyo Jaaliyada Nigerianka ee UK. Waxaa kale oo Siminaarkan kasoo qeyb galaya Jaaliyadaha somalida Ogadeiya ee Europe.
Jaaliyada Somalida Ogadeniya ee wadanka Denmark ayaa Xubin ka ah oo shaqo wadaag la leh jaaliyado caddaan ah oo kasoo jeeda Wadanka Ireland iyo Finland iyo waliba wadanka UK jaaliyado iyagu kaso jeeda Qowmiyada Nigerianka. Waxaa xidhiidhka jaaliyadahan uu bilowday muddo illaa sanadkii 2010 halkaas oo xidhiidh xoog badan ay yeesheen. Waxaana Saxiibada Jaaliyada Denmark ay ku tixgaliyeen in sanadkan ay jaaliyada Somalida Ogadeniya ee Denmark ay qabato siminaaro loogu talo galay isdhexalka jaaliyadahan. Sidookale waxaa Si qotto dheer looga warami doona Dhaqanka Shacabka Somalida Ogadeniya. Dhibaatada Gumeysi ee soo heysatay mudada dheer iyo arrimaha xuquul insaanka.
Jaaliyadaha Somalida Ogadeniya Dibadaha ayaa haddiyo jeer raadiya sidii ay saxiibo ugu sameyn lahaayeen qadiyada Ogadeniya. Islamarkaasna ay isu dhexgal ula sameyn lahaayen jaaliyadaha ay dariska yihiin. si ay uga faaideystaan dhan khibradeed iyo dhan halgan intaba.
Siminaarka oo Barito ka bilaabmi doona Hotel aad u weyn oo ku yaala magaalada Copenhegan ayaa idiin soo gudbin doona wararka la xidhiidha Shirkan.